महिला भलिबलको प्रशिक्षण आजदेखि सुरु : को-को खेलाडी परे छनोटमा ? « Yoho Khabar
महिला भलिबलको प्रशिक्षण आजदेखि सुरु : को-को खेलाडी परे छनोटमा ?
काठमाडौँ – राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीको प्रशिक्षण आजदेखि सुरु हुँदैछ । कोरोना महामारीका कारण गत जेठ २१ गतेदेखि सुरु हुनुपर्ने प्रशिक्षण स्थगन गरिएको थियो । प्रशिक्षणका लागि टोलीका अधिकांश खेलाडी काठमाडौँ आइसकेको नेपाल भलिबल सङ्घका महासचिव जितेन्द्रबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो ।
बन्द प्रशिक्षणका लागि टोलीमा परेका केही खेलाडी काठमाडौँ आउने क्रममा छन् । सङ्घले गत चैतमा सम्पन्न एनभीए क्लब भलिबल लिगबाट ३० खेलाडी छनोट गरी प्रशिक्षणमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा भरतपुरका आरती सुवेदी र निशा चौधरी, डायमण्डकी प्रगति नाथ, ढोरपाटनकी पुष्पा शाही र पुलिसकी पुष्पा चौधरी रहेका छन् । सङ्घले महिला टोलीका व्यवस्थापकमा उपाध्यक्ष मास्केलाई चयन गरेको छ । टोलीको ट्रेनरको जिम्मेवारी अञ्जु श्रेष्ठले पाएकी छन् ।
महिला टि – ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय शृंखलामा नेपाल पराजित
नेपाली महिला टोलीले जेठ २ गते युगाण्डासँग ट्वान्टी–२० श्रृंखला खेल्ने,श्रृखंला प्रतिष्पर्धात्मक हुने प्रशिक्षकको अनुमान
अपहरणपछि महिलाको हत्या गरेको आरोपमा तीनजना पक्राउ
टेष्टमान्यता प्राप्त राष्ट्रको टिमविरुद्धनेपाललाई ऐतिहासिकसिरिज, कमब्याकगर्न सिपालु नेपाल